Saliidaha Dabiiciga ah ee Timaha Uroon - Daryeel Magazine
Saliidaha Dabiiciga ah ee Timaha Uroon
Dadka badankiis waxaa ay jecelyihiin inay yeeshaan timo dhalaalaya oo qurux badan ,waxaanay isticmaalaan waxyaabo laga sameeyay maadooyin u badan kiimiko si ay riyadooda ugu rumoowdo.
Saliid Qumbaha (Coconut oil): Saliida qumbaha tinta ayay korisaa waxayna siisaa qurux iyo dhalaal, basadane waxay ka ilaalisaa qallaylka.
Saliida afokaadhada (avocado oil): saliida afokaadhada waxa ku jira fitamiin A, D, E iyo Omega 9 oo dhamaantood nafaqeeya tinta. Saliidan waxay si aad ula dagaallanta go’itaanka timaha. Waxaa la rumaysan yahay in saliidani ay tahay mida ugu fiican ee tinta qalalan.
Saliid Saytuun (olive oil): Waxaa xusid mudan in rasuulkeena nabad galyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee uu nagula dardaarmay in geedka saytuunka saliidiisa aan marsanno, Saliida saytuunku waxaa ku jirto macdan ka hortagto inay tintu khafiif noqoto, waxay firfircooni ku beerta wareegga dhiigga tinta soo gaarayo taasoo caawinayso inay tintu korto. Sidoo kale saliida saytuunku waxay daaweysaa agoolka waxayna yaraysaa jajabka tinta iyo daadashada.
Castor oil: Castor oil waxay qani ku tahay Fitamiin E, borotiin iyo macaadin. Waxay dishaa agoolka, waxayna tinta siisaa qoyaan iyo jileec sidoo kale waxay caawisaa koriinka tinta.
Argan Oil: Aragan oil oo laga shiido geedka loo yaqaano “Argan tree” waa geed ka baxo waqooyiga Africa khaas ahaan wadanka Marocco, waa saliid cuntada iyo is-qurxinta labadaba loo isticmaalo. Saliidan timaha ayay qalaylka ka ilaalisaa, kadibna waxay ka dhigtaa timo sibiibix ah oo aad moodaysid sidii adoo koferka ka yimid markad marsato. Waxaa ku jira saliidan fitamiin E. Waxayna timaha ka ilaalisaa jajabka iwm.
Jilciso Dabiici Ah Oo Tinta U Fiican Nafaqo Uroon Tinta Jajabaysa Faraqa U Dhexeeya Saliidaha Laga Tuujiyo Dhirta Iyo Dufanka Xoolaha Dawada Dabiiciga ah ee Agoolka ama Toxobta